Accor dia manana valiny maimaimpoana amin'ny COVID-19: dokotera virtoaly
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Accor dia manana valiny maimaimpoana amin'ny COVID-19: dokotera virtoaly
Manomboka anio, ny mpitsidika trano fandraisam-bahiny Accor any Aostralia, Nouvelle Zélande ary Polinezia frantsay dia hanana fidirana amin'ny tambajotranà mpitsabo ara-pitsaboana an'arivony 24/7 amin'ny alàlan'ny fifampidinihana amin'ny tele-pitsaboana hanampy amin'ny toe-javatra ara-pitsaboana rehetra mitranga mandritra ny fotoana ijanonany.
Ity serivisy fitsaboana maimaimpoana ity dia azo ampiharina amin'ny filàna ara-pitsaboana tsy maika ary mety amin'ny, fa tsy ferana, ny olana Covid-19 satria mamela ny vahiny hahazo torohevitra ara-pitsaboana ao amin'ny efitranon'ny efitranony.
Accor dia manolotra fifandraisan-davitra ara-pitsaboana manam-pahaizana manokana amin'ireo vahiny mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny sy trano fonenana erak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa matotra miaraka amin'i AXA, mpitarika manerantany momba ny fiantohana sy ny vahaolana telemedicine.
Simon McGrath, COO ao amin'ny Accor Pacific, dia naneho hevitra hoe: “Tsotra tokoa ny fikasanay - hikarakara sy hikarakara ireo vahiny sarobidy aminay rehetra.
Ary koa ny fandraisana anao amin'ny fomba mafana sy azo antoka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny na trano fandraisam-bahiny Accor, ny fiaraha-miasantsika amin'ny AXA dia hanampy ireo vahiny amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo haingana sy haingana ny torohevitra ara-pitsaboana. Manantena izahay fa hitondra fiadanan-tsaina bebe kokoa ity hetsika ity. ”
Accor dia nanao ny laharam-pahamehana ny fiarovana ireo vahininy isan'andro isan'andro nandritra ny 50 taona mahery, noho ny fari-pahaizana ambony momba ny fahadiovana sy ny fahadiovana ampiharina amin'ireo hotely rehetra manerantany.
Noho ny areti-mandringana Covid-19 sy hiantohana ny fiarovana ny vahinin'ny olona sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia nampiakatra hatrany ireo fanao ireo i Accor tamin'ny fiandohan'ity taona ity tamin'ny alàlan'ny fandefasana ny mari-pamantarana ny fahadiovana sy ny fisorohana, ALLSAFE, izay manana ny fenitra fanadiovana henjana indrindra sy ny fomba fiasa miasa ao amin'ny ny tontolon'ny fitiavana mandray vahiny mba hiantohana fa hanana fiadanan-tsaina ny olona rehefa mijanona miaraka amin'ny Accor.
Misy protokolola 16 fanampiny, ao anatin'izany ny tompon'andraikitra ALLSAFE isaky ny trano fandraisam-bahiny, fiofanana fanampiny ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, ary ny protokoleta fanadiovana nohatsaraina izay misy ny fampiasana vokatra kilasy fitsaboana fantatra hahafaty ilay virus.
Tamin'ity taona ity, ny ekipan'i Accor dia nirotsaka an-tsehatra ihany koa tamin'ny fikarakarana ny vahiny natokana na mitokana, ny toeram-ponenan'ny mpiasa eo anoloana, ary ny fonosana ho an'ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy, ary koa ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Accor koa dia nanome fialofana ho an'ireo tsy manan-kialofana sy mpikambana marefo amin'ny fiarahamonina izay mila fialofana mandritra ny krizy.
Nanidy ny sisintany i Tasmania, manaraka ny ankamaroan'ny Aostralia
Nanampy an'i Macao ho mpikambana ny fikambanana Organisations of World Heritage Cities